PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-08-19 - Uphika eyokudiza ngezingubo zikancwane
Uphika eyokudiza ngezingubo zikancwane
U-Ayanda uthi uphisane ngezakhe
Ilanga langeSonto - 2018-08-19 - Front Page - SANDILE MAKHOBA makhoba@ilanganews.co.za
INKOSIKAZI kasfiso Ncwane, u-ayanda, icacise ngendaba esisuse ukukhuluma, yezimpahla ezibonakale zigqokwe ngowesilisa thizeni, okuthiwa ngezikamufi usfiso.
Usfiso obengaconsi phansi kubathandi bomculo wokholo kuleli ushone mhla ka-5 kuzibandlela (December) ngo-2016 ngemuva kokuxinwa wukugula isigubhukane.
Ukubonakala kwalona wesilisa efake leli bhulukwe sekuqubule nezinsolo sokuthi kungenzeka ukuba bayajola.
Lona wesilisa, ongupercy Nyoka, ucula eqenjini lomculo wokholo, Abathandwa, elingaphansi kwenkampani ka-ayanda, incwane Communications. Uphinde abheke yonke imisebenzi yehhovisi lale nkampani.
Ukubonakala kukanyoka egqoke lezi mpahla ezifana nse nezikasfiso kucasule abalandeli bakasfiso.
Ecacisa u-ayanda, utshele
ILANGA Langesonto ukuthi izimpahla ezigqokwe ngupercy ngezakhe u-ayanda, wayezigqoka kusekhona usfiso.
“Abathandwa bayafana nezingane zami. Leli bhulukwe eligqokwe ngupercy ngelami, ngangiligqoka kusekhona umyeni wami. Izimpahla eziningi engangizigqoka ngaleso sikhathi sengaphisana ngazo ngoba zingivusela iminjunju,” kusho u-ayanda.
Uqhube wathi upercy ushayela ngisho izimoto zakhona kwancwane.
“Upercy nguyena onezincwadi zokushayela yingakho ehamba nangezimoto zenkampani. Ngiyacela abantu bengangijahi, okwamanje ngisathokozela ukuba yinkosikazi kasfiso Ncwane,” kuqhuba u-ayanda.
Utshele leli phephandaba ukuthi izinto zikasfiso usazibe- kile, uzibekele izingane zakhe.
“Izingubo zikasfiso ziyogqokwa ngungcweti nomawenza. Uncwane wayengasebenzi efemini, akashiyanga mali eningi, yingakho konke akushiya ngikugadise okwezikhali zamantungwa ukuze izingane zakhe zizokhula kahle,” kuqhuba yena.
Uthi usekhathele ngabantu bemtshela ukuthi uyajola, wathi yena esazihlalele. Uthi abantu mabamyeke phansi.
“Unkulunkulu uyongikhombela umuntu uma sekufanele, iqiniso ukuthi vele nami ngisemncane, uma sekufike isikhathi kuyokwenzeka. Ngeke ngilinde uncwane ngoba ngeke esabuya,” kuqhuba yena.
Ucele abantu ukuthi baseke iqembu Abathandwa engomeni yabo entsha ethi “Ehhe Moya Wami”. Iyatholakala kuzona zonke izitolo zomculo.
INKOSIKAZI kasfiso Ncwane, u-ayanda, iyaziphika izinsolo zabalandeli balo mculi (ongasekho) zokuthi idize ngezimpahla zakhe kowesilisa njengoba kubonakala ezithombeni ezincane.
KWESOKUDLA: U-ayanda Ncwane nomufi usfiso babefaniselene, okuyinto ababevame ukuyenza. KWESOBUNXELE: Yisona lesi sithombe esisabalale ezinkundleni zokuxhumana, kwasuka umsindo abantu bethi upercy Nyoka ugqoke izimpahla zikamufi usfiso Ncwane.